မော်ဒယ် Marnie Simpsonရဲ. ခန္ဓာကိုယ်အလှပြကွက်များဟာ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိနေ | Buzzy
မော်ဒယ် Marnie Simpsonရဲ. ခန္ဓာကိုယ်အလှပြကွက်များဟာ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိနေ
မော်ဒယ် Marnie Simpson ဟာ အပျိုတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသူမကိုယ်တိုင်ပြောထား...
မော်ဒယ် Marnie Simpson ကတော့ သူမဟာ အပျိုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့် ဟပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ. ယောင်္ကျားလေးသူငယ်ချင်းနဲ့ စကားပြောထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေလည်း ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှု မရှိပါဘူးတဲ့။သူမတို့ ရဲ. ဆက်ဆံရေးဟာ သာမန် အဆင့်ပါပဲလို့ Marnie Simpson ကဖော်ပြထားပါတယ်။သူမတို့ ဟာ ဘာစီလိုနာ ကို အလည်သွားခဲ့ကြစဉ်ကတည်းက အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ယခုအချိန်မှာ မော်ဒယ် Marnie Simpson ရဲ. အချစ်ရေးနှင့်ပတ်သတ်လို့ စိတ်ဝင်စားနေသူများရှိခဲ့ကြပေမဲ့ သူမဟာ သာမန်ရင်းနှီးမှု မျိုးကိုသာ လက်ခံခဲ့ကြောင်းငြင်းထားပါတယ်။
မျောဒယျ Marnie Simpson ကတော့ သူမဟာ အပြိုတဈယောကျဖွဈတဲ့အကွောငျးဖှငျ့ ဟပွောကွားလိုကျပါတယျ။သူမရဲ. ယောကငြ်ျားလေးသူငယျခငျြးနဲ့ စကားပွောထားတဲ့ အကွောငျးအရာတှလေညျး ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျမှု မရှိပါဘူးတဲ့။သူမတို့ ရဲ. ဆကျဆံရေးဟာ သာမနျ အဆငျ့ပါပဲလို့ Marnie Simpson ကဖျောပွထားပါတယျ။သူမတို့ ဟာ ဘာစီလိုနာ ကို အလညျသှားခဲ့ကွစဉျကတညျးက အဆငျမပွဖွေဈခဲ့တာလို့ သိရပါတယျ။ယခုအခြိနျမှာ မျောဒယျ Marnie Simpson ရဲ. အခဈြရေးနှငျ့ပတျသတျလို့ စိတျဝငျစားနသေူမြားရှိခဲ့ကွပမေဲ့ သူမဟာ သာမနျရငျးနှီးမှု မြိုးကိုသာ လကျခံခဲ့ကွောငျးငွငျးထားပါတယျ။
ဆွဲဆောင်မှု အားကောင်းတဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ မီးခိုးရောင်အခြေအနေတွေက မော်ဒယ် Marnie Simpson ကို ပို၍ ကြည့်ကောင်းအောင်ပြု လုပ်နေတာပါ။သူမဟာ အတို အပြတ်တွေကိုဝတ်ပြီး အလှပြဖို့ ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာ အလွန်ကို ကြည့်လို့ ကောင်းနေတယ်ဆိုတာမငြင်းနိုင်ပါဘူး။
ဆှဲဆောငျမှု အားကောငျးတဲ့ မကျြနှာပျေါမှာ မီးခိုးရောငျအခွအေနတှေကေ မျောဒယျ Marnie Simpson ကို ပို၍ ကွညျ့ကောငျးအောငျပွု လုပျနတောပါ။သူမဟာ အတို အပွတျတှကေိုဝတျပွီး အလှပွဖို့ ရိုကျထားတဲ့ဓာတျပုံတှမှော အလှနျကို ကွညျ့လို့ ကောငျးနတေယျဆိုတာမငွငျးနိုငျပါဘူး။